Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguSilke
Sinikezela ngamagumbi amabini eendwendwe anebhedi ephindwe kabini okanye iibhedi ezingamawele, nceda ubuze ngendawo yokuhlala yosapho. Ixabiso li-2 abadala kwigumbi ngalinye.
I-Posi yindawo yokutya, i-cafe, ivenkile yezipho kunye nolwazi lwabakhenkethi yonke into enye, ivala ngo-5.30 pm. Ihotele yolwimi kunye neBen Loyal inika isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kude kube ngu-8-9 pm.
I-Fuel ifumaneka kwipompo ye-24/7.
Siyakuthanda ukuloba, ukuhamba induli, ukukhwela ibhayisekile kwaye siya kunceda nangayiphi na indlela esinokuyenza ngayo.